အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာဥရောပမှာတော့ရထားခရီးသွားရန်အတွက်ဒီတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ် Is? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာဥရောပမှာတော့ရထားခရီးသွားရန်အတွက်ဒီတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ် Is?
ရထားယူပြီး၏အရှိဆုံး underrated ပုံစံများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ခေတ်မီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. Intercontinental အဖြစ် လေယာဉ်ပျံ စီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုပြီးတတ်နိုင်ဖြစ်လာ, ဒါပေမဲ့ရထားနေရာတိုင်းမြင့်တက်များမှာ. ရထားခရီးသွားလာရန်အရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်.
အဆိုပါ Bernina Express ကို
ဥပမာအားဖြင့်, ကကမ်းလှမ်းမြင်ကွင်းများ Bernina Express ကို တစ်ဦးတည်းနေတဲ့ရထားလမ်းဇှတျထိုးသမားသို့မဆိုလေကြောင်းလိုင်းဝါသနာအိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လုံလောက်တဲ့များမှာ. Chur နှင့်စိန့်ကနေဆန့်. မြောက်ပိုင်းအီတလီနိုင်ငံရဲ့ Tirano ဖို့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရှေ့ပိုင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Moritz, အဆိုပါ Bernina Express ကိုလည်းအများဆုံးသာယာလှပအဖြစ်လူသိများသည် ရထားလမ်းခရီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ. ဤသည်ခရီးတစ်စုစုပေါင်းအထိချဲ့ 90 မိုင်. ဆိုလိုသည်မှာ4ရုပ်ရှင်၏နာရီ အယ်လ်ပိုင်းရှုခင်းများ, ရေခဲမြစ်, ကြီးမားသောရေတံခွန်များ, နှင့်သိသိသာသာမြစ်တို့သည်.
အဆိုပါအားလုံး လှပသောရှုခင်း နေ့စဉ်ခရီးသည်တင်ကားတစ်စီးထဲတွင် Express ကို '' ရက်ရက်ရောရော Vista ပြတင်းပေါက်မှတဆင့်မြင်နိုင်သည်. ခရီး Bernina Pass ကိုမှာ culminates. တွင် 7,000 ခြေဘဝါးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်, အဆိုပါ pass တဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နှင်းမုန်တိုင်းမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ဤအတောအတွင်း, နေရောင်များသော အီတလီနိုင်ငံသငျသညျစောငျ့မြျှော ဒီခရီး၏အခြားအဆုံးမှာ. ဤသည်သာယာလှပ ရထားစီးနင်း တိုင်းရထားလမ်းကိုနှစ်သက်မယ့်ရေပုံးစာရင်းထဲတွင်မဖြစ်မနေဖြစ်သင့်.
ဤအတောအတွင်း, စာရင်းအပေါ် Express ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းကြသည့် DB သို့မဟုတ် Deutsche Bahn ဖြစ်ပါသည်. ဂျာမဏီရဲ့အမျိုးသားရေးမီးရထားကွန်ယက်ကိုမြစ်ရိုင်းအနီးအရှိဆုံးသာယာလှပစီးအချို့ကမ်းလှမ်း. ၎င်း၏လမ်းကြောင်းဒီကဗျာဟာအဲလ်ပ်တောင်တန်း၏အမြင်များနှင့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ချိုင့်မှတဆင့်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်. ဥပမာအားဖြင့်, တန်ဖိုးထားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဥရောပအရှည်ဆုံးမြစ် Mainz ်မြို့ရွာတို့အဆက်သွယ်နှင့်သောလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် Cologne. ဤလမ်းကြောင်းသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့တောင်ကုန်းအားဖြင့်သင်တို့ကြာ, ပြိုကျရဲတိုက်, နှင့် ကျန်ကြွင်းစပျစ်ဥယျာဉ်.
DB ကြောင်း Connect ပုံမှန်ရထားစီးကမ်းလှမ်း အမ်စတာဒမ်တူသောမြို့ကြီးများ, ကိုပင်ဟေဂင်, နှင့်ပရာ့ဂ်ဂျာမဏီရဲ့အဓိကလိုမြို့ကြီးပြမှ. အဆိုပါ Bernina Express ကိုဆင်တူ, ဒါကြောင့်ဥရောပရဲ့ဗဟိုကိုမြင်ရဖို့စိတ်ကူးလမ်းဖွင့်. ထိုသို့အံ့ဩစရာမရှိဖွင့် CNN ကအဆိုပါ Deutsche Bahn ကိုရည်ညွှန်းသည် အဖြစ် "အများဆုံးသာယာသောများထဲမှ ဂျာမန်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံများ ကြောင်း "ဟု Mercedes-Benz 450. ပါဝင်ပါဘူး ဥရောပရဲ့ရထားအများစုမှာတာရှည် Cross-တိုင်းပြည်နှင့် Cross-တိုက်ကြီးခရီးများအတွက်တန်ဖိုးကြီးနေစဉ်, ပိုပြီးပေါ့ပေါ့ရထားခရီးသွားများအတွက်သည်အခြားတိုတောင်းရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. ဥပမာအားဖြင့်, အဆိုပါ ဘာလင် Ringbahn အမြဲအကြားလူကြိုက်များခဲ့သည် ခရီးသွားဧည့် ရိုးရှင်းလိုသူ အပန်းဖြေ မြို့အလှည့်လည်. သငျသညျတစ်ခုတည်းလက်မှတ်များ၏စျေးနှုန်းအဘို့ဤအထဲကကြိုးစားနိုင်.
Trans-Siberian Express ကို
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရထားခရီး၏အဘယ်သူမျှမဆွေးနွေးချက် Trans-Siberian Express ကိုအပါအဝင်မပါဘဲပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်. ထို့အပြင်အဖြစ်လူသိများ အရှည်ဆုံးမီးရထားခရီး ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်, Trans-Siberian Express ကိုအရှေ့ရုရှား Vladivostok ၏ကမ်းရိုးတန်းမြို့အနောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုချိတ်ဆက်. လမ်းတစ်လျှောက်, တူသောအနီးအနားနိုင်ငံများတွင်သို့ထွက်ရထားလမ်းအကိုင်းအခက် တရုတ်နိုင်ငံ, မွန်ဂိုလီးယား, နှင့်မြောက်ကိုရီးယား. အတွက်အများအပြားနေရာများ အနောက်ဥရောပ, အမ်စတာဒမ်အပါအဝင်, ရှိ မီးရထားဘူတာ ကြောင်းကမ်းလှမ်းမှုစိန့်အတွက် Trans-Siberian ဘူတာရုံမှစီး. ပီတာစဘတ်, ရုရှားနိုင်ငံ. အများအပြားဥရောပအရှေ့စွန့အခါမီးရထားယူဖို့ရှေးခယျြအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ.
ရထားရုရှားနိုင်ငံတဝိုက်ခရီးသွားလာ၏တစျခုဖွစျသညျ ခရီးသွားလာစျေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းတွေ. ခွင့်ပြု, ဒါကြောင့်လည်းအနှေးဆုံးတဦးရဲ့, Ladbrokes တစ်ခုဟုဆိုကာနှင့်အတူ နေ့ချင်းညချင်းအိပ်ပျော်ရထား Volgograd ထံမှ Nizhny Novgorod မှကြာ 27 နာရီ. နေဆဲ, တိုင်းပြည်ကမ္ဘာ့ဖလားအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်အခါရုရှားရဲ့ကျယ်ပြန့်ရထားလမ်းစနစ်ကယခုနှစ်အရေးယူမှုတွေအများကြီးကိုမြင်လျှင်. သူတို့ရထားအားဖြင့်လ်တာခရီးအဖြစ်အတော်များများပရိတ်သတ်တွေတိုင်းပြည်နှင့်၎င်း၏လူများကိုပိုမိုတွေ့မြင်တယ်.
ဤသည်၏အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်မကြာခဏ-သတိမမူရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ် မီးရထားခရီးသွားလာ. မုချ, လူအများကဲ့သို့ဘာမှမရှိဘူးင် အတွေ့အကြုံများ သင်လမ်းတလျှောက်တွင်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကလူအချို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အဆင်သင့် Get. ဘယ်ဟာကို Cross-တိုင်းပြည်ရထားခရီးသငျသညျပေါ်မှာဆိုရင်, သငျသညျခငျြးကိုနေ့ချင်းညချင်းခရီးသွားများအတွက်အကြားမိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုရှာတွေ့အထိကိုအဆုံးသတ်ဖွယ်ရှိနေ. သင်သာယာလှပ Bernina Express ကိုယူပြီးဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, အဆိုပါ Deutsche Bahn သို့မဟုတ် Trans-Siberian Express ကိုဖြစ်စေအပေါ်အများအပြားနိုင်ငံတွေကိုဖြတ်သန်း, သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ Glacier Express ကိုအပေါ်လျှော့ပေါ့, အဆိုပါယဉ်ကျေးမှုခရီးစဉ်ဟာ Bernina ၏မြင်ကွင်းများအပြိုင်ခရီးတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်, ရထားခရီးသင်၏အသက်တာ၏အရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အတွေ့အကြုံများတဦးဖြစ်ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်.
To get the best train experience in your life, obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်စိတ်သက်သာရာမှာ, အသုံး တစ်ဦးကရထား Save!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/fascinating-train-travel-europe/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#transsiberian trainjourney ရထားခရီးသွား traveltips